Yedu yakanakisa indasitiri dhizaini timu uye chigadzirwa manejimendi timu iripo kutsigira zvaunoda.
Chidzidzo cheMusika:Kuti urambe uri mberi kwemaitiro emusika, boka rekutengesa reEASO rinoita nguva dzose indasitiri uye tsvakurudzo yemusika kuburikidza nekuongorora nzvimbo, tradeshows kudzidza, tsvakurudzo yepaIndaneti uye zvidzidzo zveshumo yeindasitiri nezvimwewo. Ruzivo rwese runoshandiswa kune imwe neimwe nhanho yezvigadzirwa zvitsva.
Chigadzirwa Dhizaini:Isu tinotarisisa mapurojekiti eODM/JDM anotanga kubva pakutsvagisa musika, dhizaini pfupi, maID ekupa, kuziva ID, kusimudzira chigadzirwa kusvika pakugadzirwa kwakawanda uye kutumira kwekupedzisira.Basa redu nderekupa mumwe nemumwe wevatengi vedu zvigadzirwa zvakanaka mumisika.
Design Awards:Isu tinozivikanwa se "Fujian Provincial Industrial Design Center" uye kambani yedu yevabereki Runner Group inoremekedzwa se" National Industrial Design Center" iyo isu tinokwanisa kugovera zviwanikwa zvekugadzira pamapuratifomu.
Shower Faucet, Delta Shower, Home Depot Shower Faucets, Shower Column, Shower Tap, Basin Faucet,